Port Scanner yeLinux: Beyond nmap yeVatariri | Linux Vakapindwa muropa
Nyanzvi zhinji dzekuchengetedza nevatungamiriri vanoshandisa maturusi akadai chiteshi chengarava nmap. Ichi chishandiso ndechimwe cheanonyanya kushandiswa uye chimwe cheakasimba kwazvo. Nekudaro, kuti ukwanise kuongorora zviteshi nemasevhisi, kune mamwe maturusi. Kana iwe uri kufunga nezvekuchinja yako "mhepo" uye uchida kuyedza imwe chirongwa, ipapo uchafarira chinyorwa ichi.
Zviripachena, maturusi aya anoshanda pane yako Linux distro. Mapurojekiti anoshanda kwazvo kuti iwe ugone kuongorora ako maratidziro, uwane masevhisi uye madoko ari kuteerera, nezvimwe Kuti uite izvi, ndinokurudzira kuti iwe utarise idzi dzimwe nzira:
Sezvandambotaura kare, ndicho chishandiso chakashandiswa par kugona kana zvasvika kune scanner yechiteshi. Zita rayo rinobva Network Mapper, uye hachisi chinhu chitsva, chave chiri kushandiswa kwemakumi emakore. Nayo unogona kuita yakawanda ongororo kuti uone yakavhurika madoko, masevhisi, shanduro, anoshanda masisitimu, nezvimwe.
Icho chimwewo chezvirongwa zvinoshanda seyakareruka uye ine simba chiteshi scanner yeLinux. Zvakare, ine GJava yakavakirwa UI izvo zvinobatsira avo vasingawirirane neiyo terminal. Nayo iwe unogona kuwana kuwanda kweruzivo nezve madoko kuti utarise iro zita revaenzi, MAC, masevhisi, nezvimwe. Uye zvakare, iyo inokutendera iwe kuchengetedza mhedzisiro mumhando dzakasiyana senge CSV, yakajeka zvinyorwa, uye XML.
Sandmap yakavhurika sosi yechiteshi scanner yakavakirwa pamusoro peiyo nmap injini. Rumwe rudzi rwe nmap pane steroids iyo yakawedzeredzwa kuti igare nekukurumidza uye inowedzera zvimwe zvinotonhorera maficha. Uyezve, inouya neanopfuura makumi matatu mamamojuru uye mazana mana ekuongorora. Uye zvechokwadi inogamuchirawo TOR network uye proxychains.
Imwe yeaya ane simba chiteshi scanner yeiyo kuunganidza ruzivo is Unicornscan. Iyo ine inharaunda inoshingairira kutsvaga rutsigiro, uye inoshandisa asynchronous kufambiswa kwekufambisa kwekutarisa chiteshi. Iyo zvakare inotsigira PCAP kusefa, tsika ma module, nezvimwe
Mumwe wekare anoziva kune vakawanda. Iyo ine simba network yekuongorora chishandiso inosanganisira yakavakirwa-mukati chiteshi scanner. Inowanzo kufarira kunyange kudemba network uye yanga ichishandiswa munzvimbo dzeUnix kwenguva yakareba.
Imwe nzira yekushandisa nmap ndeye Zeus Scanner port scanner. A advanced sarudzo iine whois ekutsvaga maficha, kuongororwa kwekushomeka, ine simba scan injini, uye zvimwe zvinhu zvinosanganisira Google dorks, firewall kuzivikanwa, IP kurambidzwa kwepashure, nezvimwe.
Chekupedzisira, imwe yeanonakidza mapurojekiti aunofanirwa kuziva ndeaya mamwe pentesting chishandiso pamwe chengarava kushanda pakuvheneka kugona. Inogona kuve chishandiso chakanaka chekutora ruzivo, fuzzing, kukambaira, nezvimwe. Iyo yakavakirwa paPython uye ine nzira dzinoverengeka dzekuongorora (ACK, XMAX,…), inobvumira kuongorora iyo OS, SSL, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Port scanner yeLinux: kupfuura nmap
Lutris: anomutsidzira iyi 2021 nenhau dzevatambi